Falcao oo amaanay kooxda aadka u dooneysa ee Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar Falcao oo amaanay kooxda aadka u dooneysa ee Chelsea.
Falcao oo amaanay kooxda aadka u dooneysa ee Chelsea.
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcao ayaa ka hadlay dareenkiisa ku wajahan Chelsea, isagoo sheegay in kooxda heysata Champions League ay awoodo wax waliba.
Goal.com ayaa isbuucaan ogaatay in Chelsea ay wadahadalo heshiis ay kula saxiixaneyso oo 60 milyan ah Janaayo kusoo qaadaneyso weeraryahanka reer Colombia, wuxuuna amaan kala dul dhacay kooxda ka dhisan Stamford Bridge, isagoo sheegay in halyeeygii Blues Gianfranco Zola uu yahay ninka uu ku daydo.
“Kama walwalayo ciyaarta xooga ku dhisan ee horyaalka Premier League” ayuu Falcao u sheegay Daily Mail.
“Waxaan goolal kasoo dhaliyay Argentina, Portugal iyo haatan Spain. Kalsooni ayaan ku qabaa inaan la qabsan karo horyaal kasta. Waan soo dhaweyn lahaa inaan ku tartamo Premier League.
“Waxaan daawanayay Premier League waqti dheer. Waxaa yaal tayo badan, waana horyaal xiiso leh. Dabcan waa iska fiican tahay inaan ku fekero inaan ka ciyaari karo.
“Chelsea waa horyaalka yurub, wax ka badan oo la dhihi karo ma jirto. Xitaa ka dib markii ay ku guuleysteen Champions League waxa ay la soo wareegeen ciyaartoyda ugu tayada fiican. Hamigooda waa cad yahay.
“Sidoo kale waxaan taageero weyn u ahaa weeraryahankii hore ee Chelsea Gianfranco Zola markii aan soo korayey.”
Caasimada — Somalia.